somali - King County
Qaybaha Kala Duwan ee Qiimaynta Amaanka Cuntada
Dhawaan waxa makhaayad kasta la siin doonaa qiimayn ka mid ah afarta qiimaynood ee cuntada si dadwaynuhu ay u helaan xog dheeraad ah oo ku saabsan heerka amaanka cuntada ee makhaayada, isla markaana ay u gaadhi karaan go’aamo ku salaysan xog buuxda marka ay guriga dibadiisa wax ka soo cunayaan. Hadii ay jirto makhaayad u furan dadwaynaha, makhaayadaasi waa mid buuxisay shuruudaha amaanka cuntada looga baahan yahay.
Needs to improve: Makhaayada waxa xidhay Waaxda Caafimaadka Dadweynaha– Seattle iyo King County sannadkii ugu dambeeyay Ama makhaayadu wuxu u baahan yahay koormeer dheeraad ah si loo hagaajiyo amaanka cuntada.
Okay: Makhaayada waxa lagu arkay: TIRO BADAN oo ah xadgudubyada khatarta ah ee heerkoodu yahay casaanka afartii kormeer ee ugu dambeeyay.
Good: Makhaayada waxa lagu arkay: DHAWR xadgudub oo khatar ah heerkoodu yahay casaan afartii kormeer ee ugu dambeeyay.
Excellent: Makhaayada waxa lagu arkay: WAXBA ama TIRO YAR oo ah xadgudubyada khatarta ah ee heerkoodu yahay casaanka afartii kormeer ee ugu dambeeyay.
Maxay ku salaysan tahay qiimaynta makhaayaduhu?
Qiimaynta makhaayaduhu waxay ku salaysan tahay saddex arrimood:
Hab dhaqanka ammaanka cuntada. Waa in amaanka cuntada maalin kasta la ilaaliyaa. Calaamadaha daaqadaha ee amaanka cuntadu waxay ka turjumayaan qiimaynta guud ee makhaayada, ee kuma koobna qiimaynta hal kormeer oo kaliya. Qiimaynta amaanka cuntada waxa lagu saleeyaa celceliska xadgudubyada khatarta ah ee heerkoodu yahay casaanka ee afarta kormeer ee ugu dambeeyay.
Qiyaasta waxqabadka. Dadwaynaha degen Degmadan King County waxay rabaan in ay ogaadaan xog dheeraad ah oo ku saabsan in makhaayaduhuay ka gudbaan ama ku fashilmaan qiimaynta kormeerka. Calaamadaha daaqadaha makhaayaduwaxay muujinayaan heerka uu gaadhsiisan yahay amaanka cuntadu marka laga yimaado heerka ugu hooseeya ee amaanka cuntada ee laga rabo makhaayada.
Khadka qiimaynta. Dadwaynaha degen Degmada King County waxay rabaan in ay ogaadaan heerka uu gaadhsiisan yahay amaanka cuntada makhaayadu marka la barbar dhigo makhaayadahakale ee ku yaala isla xaafadaas. Makhaayad kasta celceliska darajadiisa waxa la barbar dhigaa makhaayadaha kale ee ku yaala deegaanka.
Halkan waxa ku cad boqolkiiba inta makhaayada ee ku jira qayb kasta. Saddexda qaybood ee qiimaynta ee kala ah “Excellent” iyo “Good” iyo “Okay” ayaa soo gali kara khadka qiimaynta, halka qabta afraad ee ah “Needs to improve” aysan ku jirin qiimaynta khadka.
Waa maxay xadgudubyada khatarta ah ee heerkoodu yahay casaanka?
Dhaqamada la xidhiidha maaraynta cuntada ee hadii aan si sax ah loo samayn ay aad u suurto gal tahay in ay yimaadaan cudurrada cuntada ka dhasha.
Bogga Hore ee Qiimaynta Amaanka Cuntada